TOKO 11: MANARAKA POLARA - Geofumadas
Andao hiverina any amin'ilay boaty fifampiresahana "Mametaka". Ny tabilao "fanaraha-maso" dia ahafahanao manitsy ny endri-javatra mitovy. Ny "fanaraha-maso polar", toy ny "fanaraha-maso ny fitadiavana" dia manamboatra tsipika misy dikanteny, fa raha ny tsatoka kosa miampita ny zoro voafaritra, na fiakarana azy, na avy amin'ireo mpandrindra fiaviana (X = 0, Y = 0), na ny teboka farany voalaza.
Miaraka amin'ny hetsika "Object Reference" sy ny "Polar Tracking", i Autocad dia mampiseho tsipika an-dàlana eo amin'ny zoro voatondro ao amin'ny boaty fifampiresahana. Amin'ity tranga ity, raha jerena ny mpanitsy ny horonantsary teo aloha, hatramin'ny teboka farany ampiasaina. Raha tianay izy io dia aseho amin'ny zoro tsipika amin'ny zoro samihafa, azontsika atao ny manampy azy ireo ao anaty lisitra ao anaty boaty fifampiresahana.
Toy ny hoe "fanaraha-maso ny" Object ", ny" fanaraha-maso polar "dia manome alalana bebe kokoa amin'ny isa iray momba ny zavatra ary haneho ny fifanolanana ireo zotra fanaraha-maso ara-nofo izay avy amin'izy ireo. Amin'ny teny hafa, miaraka amin'ity toetra ity, rehefa manao zavatra vaovao dia azontsika atao ny manondro teboka amin'ny zavatra ("teboka", "quadrant", "afovoany", sns) ary ireo vectors mivaingana dia hisongadina; Avy eo dia manondro fitenenana zavatra iray hafa isika, izay hahitantsika ny làlan-jorom-baravarana miakatra avy amin'ny fanarahana ireo teboka roa ireo.
Noho izany dia hanantitrantitra isika fa ireo fitaovana iraisana 3 ireo, "Object Reference", "Tracking ..." ary "Polar Tracking" dia mamela antsika hamorona ny geometran'ny zavatra vaovao haingana haingana avy amin'izay efa voasintona ary tsy manala baraka. ny fahatokisana.
Previous Post«Previous TOKO 10: FAMPIASANA NY FITSIPIKA NY FIFANEKENA
Next Post TOKO 12: FITSARANA PARAMETRIKAmanaraka »